Hydralazine HCL budada (304-20-1) hplc = 98% | AASraw R & D Reagents
/ Products / R & D Reagents / Hydralazine HCL budada
SKU: 304-20-1. Category: R & D Reagents
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa amar guud oo ah budada Hydralazine HCL (304-20-1), iyadoo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Hydralazine HCL budada waa murgutatooraha oo ka shaqeeya adoo nasinaya muruqyada ku jira marinnada dhiiggaaga si ay uga caawiyaan iyaga oo kiciya (ballaadh). Tani waxay hoos u dhigeysaa cadaadiska dhiigga waxayna u oggolaaneysaa dhiig inuu si fudud ugu soo baxo xididka iyo xididdada.
Hydralazine hydrchloride video budada
Hydralazine HCL budada Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Hydralazine hydrochloride budada
Formula kelli: C8H9ClN4
Miisaankani waa: 196.64
Dhibcaha Biyaha: 280-282 ° C
Hydralazine hydrochloride budada loo isticmaalo
Magacyada Brandada: Apresoline
Magaca Guud: Hydralazine HCL budada (Caadiga: hye DRAL zeen)
Isticmaalka budada Hydralazine HCL
Hydralazine HCL ayaa loo isticmaalaa daaweynta dhiig karka. Kiniiniga Hydralazine hydrochloride wuxuu ku jiraa heer daweyn ah oo loo yaqaanno vasodilators. Waxay ka shaqeysaa iyada oo la nasasiiyo xididdada dhiigga si dhiigga uu si fudud ugu dhex mari karo jirka.
Dhiig karku waa xaalad caadi ah oo aan la daweyn, waxay sababi kartaa waxyeelo maskaxda, wadnaha, xididdada dhiigga, kelyaha iyo qeybaha kale ee jirka. Burbur ku yimaad xubnahaasi waxay sababi karaan cudur wadne, wadne-qabad, wadnaha oo shaqeynaya, stroke, kalyaha oo aan waxba galabsan, aragti la'aan, iyo dhibaatooyin kale. Ka sokow qaadashada daawada, sameynta isbeddelka hab-nololeedka ayaa sidoo kale kaa caawin kara xakamaynta cadaadiska dhiiggaaga. Isbeddeladaan waxaa ka mid ah cunista cuntada oo ku yar dufanka iyo milixda, sii wadida miisaan caafimaad leh, jimicsi ugu yaraan 30 daqiiqadaha ugu badan, ma cabin sigaarka, iyo isticmaalka khamriga ee dhexdhexaadinta.
Waa maxay qiyaasta Hydralazine hydrochloride budada
Dhiirrigelinta bukaanka qaangaarka ah:
Ku bilaw daaweynta qadar yar oo kordhi tartiib tartiib ah oo ku salaysan jawaab-celinta bukaanka. Xaddiga bilowga ah ee la soo jeediyey waa 10 mg afar afar jeer maalin kasta 2 maalmaha 4, kororka 25 mg afar jeer maalin walba inta ka hartay wiiga ugu horeeya.
Toddobaadyada labaad iyo kuwa soo socda, waxay kordhiyaan qiyaasta 50 mg afar jeer maalintii (kor u qaadista qiyaasta 10-25 mg / dose si tartiib ah maalin kasta 2-5).
Qiyaasta ugu sareysa ee loo isticmaalo daraasaddaha kiliiniga waa 300 mg.
Wadnaha oo ku fashilmay wadnaha:
Qiyaasta bilawga ah ee daaweynta wadnaha wadnaha waa 10 in 25 mg afka laga qaato 3 ilaa 4 maalin walba.
Qiyaasta caadiga ah waa 225 ilaa 300 mg maalin walba 3 ilaa 4 loo kala qaybiyey.
Xaaladaha degdega ah ee cudurrada carruurta, qiyaasta daawada waa 0.5 mg / Kg IV kasta saacadaha 4.
Sidee u shaqeeyaa Hydralazine HCL budada
Hydralazine Hibaha HCL waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cadaadis dhiig oo sarreeya (hypertension). Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu xakameeyo cadaadiska dhiigga ee hooyada inta ay uurka leedahay (pre-eclampsia ama eclampsia) ama xaaladaha degdega ah marka cadaadiska dhiiggu uu aad u sareeyo (hypertensivecrisis).
Cadaadis dhiig oo sarreeya wuxuu ku darayaa culeyska shaqada wadnaha iyo xididdada. Haddii ay sii socoto wakhti dheer, wadnaha iyo xididada ayaa si habboon u shaqayn kara. Tani waxay burburin kartaa weelasha dhiigga ee maskaxda, wadnaha, iyo kelyaha, taas oo keenta istaroog, wadnaha oo aan shaqeynin, ama kalyaha oo aan shaqayn. Cadaadiska cadaadiska dhiigga wuxuu kordhin karaa khatarta wadno xanuun iyo istaroog.
Kiniinada Hydralazine hydrochloride waxay u shaqeysaa iyada oo la nasasiiyo xididdada dhiigga iyo sii kordhinta bixinta dhiigga iyo ogsijiinta dhiigga ee wadnaha iyada oo la yareeyo culeyska shaqada.
Waa inaadan isticmaalin daawadan haddii aad xasaasiyad ku leedahay budada Hydralazine hydrochloride, ama haddii aad qabtid cudur halbowlaha ah, ama cudurka wadnaha ee rheumatic ee saameeya mitraliga mitralka.
Ka hor inta aanad qaadan budada Hydralazine HCL, u sheeg dhakhtarkaaga haddii aad qabtid cudur kalyaha, lupus, pectoris angina (xanuunka laabta), ama haddii aad waligaa ku dhacay istaroog.
Markaad qaadato budada Hydralazine hydrochloride, iska ilaali inaad si degdeg ah uga soo degto meel fadhiisato ama jiifto, ama waxaad dareemi kartaa dawakh. Si tartiib ah u soco oo is-xaji si aad uga hortagto dayrta.
Wac dhakhtarkaaga isla markiiba haddii aad leedahay waxyeello culus sida garaacista wadnaha ama bararka, bararka, kabuubyada ama xoqidda, kaadida mugdiga ah, xanuunka wadajirka ah ama bararka qandhada, xanuunka feeraha, daciifnimo ama dareen daal, iyo kaadid ka yar sidii caadiga ahayd ama ma ahan.
Si aad u hubiso in daawadani ay caawineyso xaaladdaada oo aysan keenin waxyeello halis ah, cadaadiska dhiiggaagu wuxuu u baahan doonaa in badanaa la eego. Waxa kale oo laga yaabaa inaad u baahato baaritaan dhiig oo marmar ah. Ha seegin ballan kasta oo la qorsheeyey.
Hayso adigoo isticmaalaya budada Hydralazine HCL sida loogu talagalay, xitaa haddii aad si fiican u dareento. Cadaadiska dhiigga badanaa badanaa ma laha astaamo, sidaa darteed ma ogaan kartid marka cadaadiska dhiiggaagu uu sarreeyo. Adiga ayaa ubaahan in aad isticmaasho dawada cadaadiska dhiiggaaga inta ka hadhay noloshaada.
Hydralazine hydrochloride Khamri cadi ah
Suuq-geynta Hydralazine hydrochloride PET
Daawada Hydralazine hydrochloride ma leedahay waxyeellada dhinac kasta ah
Hel gargaar caafimaad oo degdeg ah haddii aad leedahay mid ka mid ah calaamadahan xasaasiyadeed ee xasaasiyad: hargab; neefsashada oo adkaata; barar wejigaaga, dibnaha, carrabka, ama cunaha.
Wac dhakhtarkaaga markiiba haddii aad leedahay waxyeello culus sida:
garaaca wadnaha oo degdeg ah ama garaacaya;
bararka wajiga, caloosha, gacmaha ama cagaha;
kabuubyo, gubasho, xanuun, ama dareemid dareemid;
dareemida inaad ka gudbi karto;
wareer, fikrado aan caadi ahayn ama dabeecad aan caadi ahayn;
maqaarka cirridka, nabaro fudud;
kaadida ama xanuun adag;
kaadidu ka yar tahay sidii caadiga ahayd ama aanba ahayn; ama
xanuunka wadnaha ah ama barar xummad, xanuun laabta ah, daciifnimo ama dareen daal.
Dhibaatooyinka yaryar ee culus waxaa ka mid noqon kara:
lalabbo, matagid, cunto xumo;
murqaha ama xanuunka laabatooyinka;
sanka oo duufsan ama sanka; ama
cuncun fudud ama finan maqaarka ah.
Sida loo soo iibsado budada Hydralazine HCL laga soo qaado AASraw
Hydralazine hydrochloride Roodhafka Rootiga:
Hydralazine HCL (304-20-1): Shaqada & Qiyaasaha & Saameynta Waxyeellada
Hydralazine HCL (304-20-1) ayaa loo isticmaalaa daawaynta dhiig karka
Kiniiniga Epacadostat (INCB024360)
Bustezomib budada (179324-69-7)
Mitoxantrone budada HCL